Trump oo Baddalay Maamulihii Ololahiisa Doraashada - Tilmaan Media
NATIONAL HARBOR, MD - FEBRUARY 28: Brad Parscale, campaign manager for Trump's 2020 reelection campaign, walks on stage during the Conservative Political Action Conference 2020 (CPAC) hosted by the American Conservative Union on February 28, 2020 in National Harbor, MD. (Photo by Samuel Corum/Getty Images)
Madaxwaynaha Marayka Donuld Trump ayaa baddalay maalinkii arbacada maamulihii mudada badan soo ahaa maamulaha ololihiisa doorasho afar bilood kahor doorashada dhici doonta saddexda bisha Noofembar. Aftida hordhaca ah ee laqaaday ayaa muujinaysa in Musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu Trump ka horeeyo.
Qoraal usoo dhigay facebook ayuu Trump ku sheegay in Brad Parscale lagu baddali doono ku xigeenka maamulaha ololaha doorashada Bill Stepien.Parscale ayaa loo dhiibi doonaa shaqo kale oo la xiriirta tiknoolajiyada iyo istiraajiyadaha maamulidda xogaha.
Waayahan dambe waxaa la saadaalinayay isbaddal lagu sameeyo maamulka ololaha doorashada Trump. Parscale ayaa lagu eedeeyay dad kayar tiradii lafilayay oo isugu soo baxay bishii hore khudbadaha madaxwaynaha ee ololihiisa doorashada ee kadhacay magaalooyinka Tulsa iyo Oklahoma.
İlo wareedyo ayaa sheegaya in Trump aad oga xumaaday natiijada aftidii ugu dambaysa ee la qaaday taasoo muujisay in uu ka dambeeyo musharaxa dimuqraadiga ee latartamaya.
Stepien, oo muddo dheer katirsanaa xisbiga Jamhuuriga waa rugcadda dhanka istiraatiijiyadda. Waxay aad isu yaqaanaan Trump iyo wiilka uu soddoga u yahay Jared Kushner. Wuxuu kasoo shaqeeyay waaxda siyaasadda ee Aqalka Cad kahor intuusan u wareegin ololaha doorasho.
Qoraalka uu facebook soo dhigay Trump wuxuu amaanay Parscale iyo Stepien kaalintii ay kaciyaareen guushiisii doorasho ee sanadkii 2016, wuxuuna rajjo kamuujiyay in markale uu ku guulaysan doono madaxnimada Maraykanka.